बजारमा नयाँ - नारी
सन् १९९० अघिदेखि विश्वभर विशुद्ध अर्गानिक उत्पादन पुर्‍याउने उद्देश्यसहित अर्गानिक इन्डियाका उत्पादन अब नेपालमा समेत उपलब्ध हुने भएका छन् । खासगरी चियाका पारखीहरूलाई लक्षित गरी पोमिग्रयानेट, लेमन, अर्लग्रे, ज्यास्मिन, क्लासिकल आदि विभिन्न स्वादका अर्गानिक चिया उत्पादन गर्दै आएको अर्गानिक इन्डियाले नेपालमा अर्गानिक चियाबाट आफ्नो बजार सुरु गरेको बताइएको छ भने बिस्तारै अन्य उत्पादन पनि नेपाल भित्रिनेछन् ।अर्गानिक इन्डियाका उत्पादन भाटभटेनी, बिग मार्टलगायत अन्य सपिङस्टोर तथा मार्टहरूमा उपलब्ध छन् ।
नारी संवाददाता , चैत्र २४, २०७५
डा. साथीले नेपाल ल्यायो अष्ट्रेलियाको नेचर्स वे ब्रान्डका उत्पादनहरु
अष्ट्रेलियाली औषधीय उत्पादनहरु आयात गर्ने पछिल्लो कदम स्वरुप डा. साथीले अष्ट्रेलियाको फर्माकेयर ल्याबोरट्रिजसँग सहकार्य गरेको छ । विभिन्न देशमा आफ्नो स्टोर ल्याबोरट्रिजलाई नेचर्स वे ब्रान्डका उत्पादनहरु नेपालमा बिक्री – वितरण प्रारमभ गरेको हो ।
नारी संवाददाता , चैत्र ११, २०७५
लोटस हर्बलको बेबी प्लस
बहुराष्ट्रिय ब्रान्डका गुणस्तरीय सौन्दर्य सामग्री उत्पादन गर्दै आएको लोटस हर्बलले नेपालमा बेबी प्लसका सामग्री भित्र्याएको छ । कम्पनीले शिशुलाई स्वस्थ राख्न मात्र नभएर छालाजन्य रोगबाट जोगाउने यी विभिन्न सामग्री भित्र्याएको हो ।
नारी संवाददाता , फाल्गुन ११, २०७५
रिचार्जर एपमा थपियो आधा दर्जन नयाँ फिचर
धेरै भन्दा धेरै सेवा समेट्ने क्रममा मोबाइल एप रिचार्जरले झण्डै आधा दर्जन नयाँ फिचरहरु थप गरेको छ । साथै रिचार्जरले भ्यालेनटाइन डे को अवसर पारेर आईफोन एक्स उपहार योजना समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
नारी संवाददाता , फाल्गुन १, २०७५
खुल्यो एपी फुट वेयर एण्ड एसोसोरिज
युवा वर्गलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा आएको यो स्टोरमा विशेष गरी आधुनिक डिजाइनका ब्राण्डेड लेडिज जुत्ता, पर्स, अफिसियल ब्याग लगायत ट्रली ब्यागहरु खरिद गर्न सकिने छ ।
नारी संवाददाता , माघ २०, २०७५
बहुराष्ट्रिय ब्रान्डका गुणस्तरीय सौन्दर्य सामग्री उत्पादन गर्दै आएको लोटस हर्बल प्रा.लि.ले नेपालमा बेबी प्लसका सामग्री भित्र्याएको छ । कम्पनीले शिशुलाई स्वस्थ राख्न मात्र नभएर छालाजन्य रोगबाट बचाउने विभिन्न सामग्री पनि भित्र्याएको छ ।
नारी संवाददाता , माघ १९, २०७५
तात्यो जाडोको बजार
धाराबाट पिउन उपयुक्त पानी नआउने भएकाले हरेकले तताएर पानी पिउने हुँदा काठमाडौंमा पानी तताउने केटलको ठूलो माग छ । सिजी, एलजी, हायर, गोदरेज, सोनी, पानासोनिक आदि ब्रान्डका विद्युतीय सामग्री हाल नेपालमा बढी प्रचलनमा छन् ।
लक्ष्मी भण्डारी थापा, मंसिर १६, २०७५
पोखरामा रचइताज फेसन बुटिक
पोखराको महेन्द्रपुलमा ‘रचइताज बुटिक’ सञ्चालनमा आएको छ । बुटिकको २०१७ की मिस नेपाल निकिता चन्दकले उद्घाटन गरिन् । बुटिकमा सारी, लेहङ्गा, कुर्था, क्याजुअल ड्रेस, पार्टी ड्रेस, ब्राइडल वेयर, पावर ड्रेसिङ लगायत अर्डर अनुसारका कपडामा बुटिक डिजाइन गरिनेछ ।
राजाराम पौडेल, कार्तिक २५, २०७५
नयाँ सेनिटरी प्याड
डा. गरिमा श्रेष्ठले ग्रामीण भेगका महिलाहरूलाई लक्षित गरेर पुन: प्रयोग गर्न सकिने सेनिटरी प्याड तयार पारेकी छिन् । यो सुलभ हुनुका साथै वातावरणमैत्री समेत छ । कपडा प्रयोग गरी निर्माण गरिएको यो सेनिटरी प्याड सुरक्षित पनि छ ।
नारी संवाददाता , कार्तिक १३, २०७५
नेपाली बजारमा बेल्ला
कम्पनीको हेयर केयर, हेयर स्टाइलिङ तथा हेयर कलर ब्रान्ड बेल्ला प्रोफेसनल्सका साथमा कोटी इङ्क नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको हो । व्यापारिक समूह विशाल ग्रुप नेपालका लागि बेल्ला प्रोफेसनल्सको वितरक साझेदार हो ।
नारी संवाददाता , कार्तिक १२, २०७५
स्पावेकको सिरम तथा बिबी क्रिम
यो अल्कोहल–फ्रि सिरमले मुहारलाई आकर्षक देखाउने मात्र नभई बाहिरी प्रदूषण, घामको ताप एवं अन्य कारणले बिग्रिएको छालामा समेत सुधार ल्याई त्यसलाई स्वस्थ र सुन्दर बनाउँछ । त्यसैगरी यो ब्रान्डको मोइस्चर बिबी क्रिम परफेक्ट ग्लो तथा नेचुरल ग्लो गरी दुई प्रकारमा उपलब्ध छन् ।
नारी संवाददाता , श्रावण १०, २०७५